एमाले फुटाउने काठमाण्डौं भेलामा पर्वतबाट को–को सहभागी भए ? – Parbat News
एमाले फुटाउने काठमाण्डौं भेलामा पर्वतबाट को–को सहभागी भए ?
५ चैत, पर्वत । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्युताए पनि एमाले एक ठाउँमा हुने अवस्था देखिएको छैन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका वीचमा भएको पाटी एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भंग गरेसंगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएका छन् । दुई पाटी मध्ये नेकपा एमालेका केन्द्र देखि जिल्ला तहसम्मका नेताहरु माओवादीसंगै नेकपामा हुँदा गरेको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन खोज्दा एमाले दुई भागमा बाँडिएको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा नेकपाको बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पाटीबाट निश्कासन गरेका थिए । उक्त निर्णय निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो । आयोगले उक्त निर्णयलाई सदर नगर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएका छन् ।
नेकपामा रहँदा आफ्नै पाटी अध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका नेताहरु पुनः एमाले मै फर्केर ओलीलाई पाटी अध्यक्ष मान्न तयार नभएपछि एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ । ओलीलाई पाटी अध्यक्ष मानेर बहुमतको निर्णय सिरोधार गर्न माधव समूह एमालेमा सहमत छैन् । माधव समूह माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मानेर अघि बढ्न खोजेको देखिएपछि एमालेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले गुटका भेला वैठक नगर्न निर्देशन दिएपनि माधव पक्षले भने देशभरका कार्यकर्ताहरु सम्हालेर केन्द्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ । काठमाण्डौंमा हिजो देखि शुरु भएको भेलालाई अन्ततः एमाले फुटाउने भेलाको रुपमा लिइएको छ ।
देशभरका अन्य कार्यकर्ताहरुले भने गुटको भेला गरेर एमालेलाई दुई भागमा फुटाउन माधव समूह सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यस्तो भेलामा पर्वतबाट पनि केहि नेताहरुको सहभागीता रहेको छ । एमालेका केन्द्रिय सदस्य विजय गुरुङ र एमाले उपाध्यक्ष भक्त कुँवरको अगुवाईमा एमाले फुटाउने भेलामा अन्य नेताहरु पनि सहभागी भएका छन् । त्यस्तो भेलामा कुँवरसंगै एमालेका सचिव तथा फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा, एमालेका पूर्व पाटी सचिव मोती पौडेल, एमालेका केन्द्रिय अनुशासन आयोग सदस्य गणेश पौडेल लगाएतका नेताहरु भेलामा सहभागी छन् ।
भेलामा जिल्लाका पदाधिकारी, निर्वाचित पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रिय केन्द्रिय, सांसद र विभागका सदस्यहरुलाई निम्तो दिइएको छ । यस्तो भेलामा जिल्ला कमिटिका सदस्यहरु खुमप्रसाद सुवेदी, उमाकान्त शर्मा लगाएतको सहभागीता रहेको छ । भेलामा पाटीका पुर्व उप सचिव उदय सुवेदी, वडाअध्यक्षहरु सुवासचन्द्र पौडेल, दलबहादुर मल्ल पनि सहागी भएका छन् ।
माधव समुह भनेर यस अघिका जिल्ला अधिवेशनहरुमा देखिएका अन्य धेरै नेताहरुको भने उक्त समूहको भेलामा सहभागीता छैन् । भेलामा वडाअध्यक्षहरुको सहभागीता नतोकिए पनि पौडेल र मल्ल पनि सहभागी छन् । बुटवलमा आयोजीत कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन र माओवादीमा मिसाउन गृहकार्य दिएको अभिब्यक्ती यस अघि नै सार्वजनिक भईसकेको छ ।
माधव समूहल सके एमाले कब्जा गर्ने नसके पाटी फुटाएर माओवादीसंग मिल्न तयारी रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै खुलासा गरेका कारण यो भेला माओवादी समूहकै समन्वयमा आयोजना गरिएको संस्थापन पक्ष तथा अध्यक्ष ओली पक्षको ठहर छ । यस अघि बामदेव गौतमले एमाले फुटाएर माले बनाएका थिए । यस पटक फेरी बामदेवले पनि एकता अभियान नामक समूह खोलेर बसेका छन् । उनी पनि एमालेमा फर्केका छैनन् । बामदेवले अर्कै समूह बनाएर हिडेका कारण एमाले तीन भागमा बाँडिने संकेत देखिएको छ ।
भेलामा सहभागी हुनेहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी यस अघि नै संस्थापन पक्षले दिइसकेको छ ।
मोदी गाउँपालिकाले चौथो स्थापना दिवस मनायो
पर्वत उद्योग बाणिज्य संघ निर्वाचन : अध्यक्ष पदका उमेदवार अधिकारी को हुन ?